မဟူရာရုပ်ရှင်ရုံ (The Dark Cinema)
ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ သရဲခြောက်ခံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ ထိုင်ကြည့်ရဖို့နီးလာပြီဆိုတော့..ကဲ... ခံစားချက်က ဘယ်လိုများပါလိမ့်???
ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ ထိုင်ကြည့်ရဖို့နီးလာပြီဆိုတော့..ကဲ... ခံစားချက်က ဘယ်လိုများပါလိမ့်???
ကိုထွန်းမင်း၊ Riya Ray ၊နေတိုး ၊ ကျော်ကျော်ဘို၊ မင်းသွေး၊ နန်းဆုဦး